Jereo hoe inona no ho hitanao ao amin'ny tanànan'ny Wales any Cardiff | Bezzia
Inona no jerena ao amin'ny tanànan'i Cardiff any Wales
Susana Garcia | 31/03/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
La Ny tanànan'i Cardiff any Wales dia manana ivon-toerana manan-tantara fa koa avy amin'ny faritra maoderina. Io no renivohitr'i Wales ary tanàna kely iray, izay azo tsidihina an-tongotra sy amin'ny fotoana fohy, ka mahatonga azy io hijanona mandritra ny roa andro. Ny trano mimanda voalohany amin'ity faritra ity dia nanomboka tamin'ny andron'ny Romana ary ankehitriny dia mbola mitahiry ny tranony mahafinaritra izy, izay iray amin'ireo faritra manan-danja sy manan-danja indrindra.
Ity iray ity tanàna manana faritra seranan-tsambo, izay nahatonga azy io ho toerana mavitrika be. Ankoatr'izay, nandritra ny Revolisiona Indostrialy dia nitombo be izy io, satria io no nanjary fivoahan'ny arintany britanika, teboka iray lehibe. Androany izy dia tanàna natokana ho an'ny fizahan-tany izay manolotra toerana maro ho hitantsika.
1 Lapan'i Cardiff
2 Lapan'ny tanàna Cardiff
3 Museum an'ny National Cardiff
5 Ny Arcade Royal
6 Tsena afovoany Cardiff Victorian
Izany no teboka manan-danja indrindra jerena ao amin'ny tanànan'ny Cardiff. Manana ny fiaviany Norman ny trano mimanda, na dia nohavaozina aza rehefa mandeha ny fotoana. Ny ankamaroan'ny fanavaozana dia noho ireo natao tamin'ny taonjato faha-XNUMX mba hahafahanao mahita fomba eklektika iray. Mipetraka eo an-tampon'ny havoana kely ny trano mimanda ary manolotra fitsidihana mahafinaritra, miaraka amin'ny toro-làlana audio misy. Azo atao ny mahita sary hosodoko fresco, rafitra vita amin'ny hazo ary efitrano samihafa izay hahagaga antsika amin'ny fifangaroany. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mianika ny Clock Tower hankafizanao ny fomba fijery.
Lapan'ny tanàna Cardiff
Ny lapan'ny tanàna dia tranobe lehibe manintona ny saina, tany am-piandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Azo atao ny mitsidika ireo efitrano misokatra ao anatiny, ka mety hitsidika mahaliana. Azonao atao ny mahita ilay antsoina hoe Marble Room miaraka amina sary sokitra ataon'ny olona manan-tantara amin'ny tantara Welsh. Mety ho hitantsika ihany koa ny efitrano Filan-kevitry ny Filankevitra na ny efitrano fivoriana, efitrano voaravaka am-pitandremana.
Museum an'ny National Cardiff
Ity trano ity dia miorina eo akaikin'ny Lapan'ny Tanànan'i Cardiff, ka azo tsidihina vetivety. Izy io dia tranon'ny zavamaniry neoclassical izay misy tranombakoka nasionaly. Izy io dia tranombakoka izay ahitantsika fampirantiana isan-karazany, noho izany dia tonga lafatra matetika ny mandeha miaraka amin'ny fianakaviana ary manana fotoana mahafinaritra sy fanabeazana. Afaka mahita isika avy amin'ny fampirantiana ny siansa voajanahary na ny zoolojia amin'ny sangan'asa manan-danja toy ny mpanoratra toa an'i Van Gogh na Rodin. Eo koa ny faritra ho an'ny ankizy, mba hahafahan'izy ireo mankafy ny siansa amin'ny fomba mavitrika sy mahafinaritra.
Ao amin'ny fon'ny Cardiff hitantsika ny mahafinaritra Bute Park, zaridaina an-tanàn-dehibe misy hatsarana tsara eo akaikin'ny lapa miitatra manamorona ny Renirano Taff. Toerana mety hialana sasatra sy hanaovana ireo lalana samihafa mamakivaky azy, an-tongotra na bisikileta. Ao afovoany dia misy toerana fanabeazana hianarana bebe kokoa momba ny zavamaniry sy ny biby ao amin'ny valan-javaboary.
Ny Arcade Royal
Ity tanàna ity dia ivon-toerana Victoria izay nisy varotra betsaka noho ny firoboroboan'ny Revolisiona Indostrialy. Androany isika dia afaka mahita galeria Victoria izay mbola miasa sy toerana fivarotana hiantsenana, ankehitriny mifantoka amin'ny fizahan-tany. SAINGY Ny Royal Arcade no tranokala tranainy indrindra an'ireo ao an-tanàna sy ilay manana lamaody mirentirenty kokoa. Izy io dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra sy toerana mety hitadiavana zavatra hanaovana haingon-trano na fahatsiarovana Welsh mahazatra tsara, noho izany dia mety ho iray amin'ireo teboka farany amin'ny fitsidihana ny fiantsenana sasany.
Tsena afovoany Cardiff Victorian
Raha tianao izany hahalala bebe kokoa momba ny gastronomia wales ary avy ao an-tanàna dia afaka mankany amin'ny tsena afovoany ianao. Ny trano miendrika Victoria misy tafo fitaratra dia tena tsara tarehy ary ao anatiny no ahitantsika ny zava-drehetra manomboka amin'ny boky faharoa ka hatramin'ny karazan-tsakafo rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Inona no jerena ao amin'ny tanànan'i Cardiff any Wales
Fijerena hatsaran-tarehy tsotra izay hamonjy ny andronao
Ahoana no hikarakarana ny fahasalaman'ny hoditrao